एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै – Paluwa Khabar
साउन ३, २०७८ आइतबार 398
आउने साउन गतेदेखि पुन निषेधाज्ञा हुन्छ ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारण जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउँछ। सरकारले कर उठाउनैका लागि मात्र खोलेको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
साउनपछि निषेधाज्ञा भएपछि कर उठाउनकै लागि खोलिएको भन्ने संजोगमात्र हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘रोग बढेपछि निषेधाज्ञाको विकल्प हुँदैन। तर, असारमा कर उठाउनकै लागि मात्र खोलिएको भन्ने गलत हो। कोरोना सं’ क्रमणदर घटेका कारण हामीले खोलेका थियौं। बढेपछि बन्द गर्नु पर्ने हुनसक्छ। यदि यस्तो भयो भने त्यो संजोगमात्र हुन्छ।
Prevमास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ?
Nextबर्दियामा पा’ टे बा’ घको आ’ क्रमणबाट फेरि १ जनाको ज्या’ न गयो
अ’ स्ताए यी एमाले नेता, जसको मृ’ त्यु नै अचम्मको तरिकाले भयो
भर्खरै ओली सरकारले ल’ कडाउन खुल्ने मिति सार्वजनिक गरे, यति गतेबाट खुल्दै लकडाउन ?